किन हुन्छ बालबालिकामा मोटोपन ? बढी मोटोपनाले कस्तो समस्या आउछ ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
बच्चाहरुमा कुपोषण ५ मूख्य मुत्युदर बढाउने रोगहरुमा पर्दछ भने मोटोपनलाई रुग्णता (Morabidity) बढाउने समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वको तथ्यांक हेर्दा मोटोपना विगत तीस वर्षको तुलनामा चार गुणाले बढेको छ । नेपालको सन्र्दभमा मोटोपनको तग्यांक सम्वन्धी खासै अनुसन्धान भएको देखिदैन ।
-स्वस्थ्य जीवनशैली नभएको कारणले हुन्छ ।
-अत्याधिक मात्रामा बाहिरी तथा तैयारी खाना जस्तै चाउचाउ, चकलेट, चिजवल, चिप्स लगायतका खाना सेवन गर्ने
-धेरैजसो समय मोवाईल, टेलिभिजन, कम्प्यूटरको प्रयोग गर्ने र
-बाहिर बढि खेल्ने समय कम हुँदै जानु मानिन्छ ।
-बच्चाको मात्रै नभएर पारिवारिक खानपिनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
मोटोपना वंशाणुगत तथा हर्मोनको अभाव तथा बढी भएको कारणले गर्दा पनि हुन्छ । जस्तै थाइराइड हर्मोनको कमी, बढ्ने हर्मोनको कमी, एड्रेनल हर्मोन बढी भएका, टाइप २ मधुमेह आदी वंशाणुगत मोटोपनामा यदि बाबु आमा मोटो भएमा पनि मोटो हुने संभावना हुन्छ ।
बच्चाको जन्मदा तौल ज्यादा बढी वा ज्यादै कम भएमा पनि मोटोपना हुने सम्भावना हुन्छ । जन्मजात समस्या जस्तै सिण्ड्रोमिक माटोपनामा प्रडेर विल्लि, बर्डेट बेइड्ल सिण्ड्रोम आदि पर्दछन् । त्यसैले मोटो बच्चाको जाँच पडेताल गर्दा शरीरको टाउको देखि खुट्टासम्म विस्तृत रुपमा जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
बच्चाको जन्मदेखिको जानकारी, शारीरिक तथा मानसिक विकासका, खानजिनका तरिका साथै विस्तृत जीवनशैलीबारे बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । विस्तृत जाँच गरिसकेपछि कारण पत्ता लगाउन र जटिलता थाहा पाउनको लागि रगत परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– टाइप २ मधुमेह
-कलेजोमा बोसोको मात्रा बढी हुने
-श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या जस्तै दम, राती स्वास फेर्न समस्या
-ढाड घुँडा सम्बन्धि समस्या
-मानसिक समस्याहरु जस्तै नैराश्यता, बालबच्चामा शाथीहरुको अगाडी मानसिक मनोवल कम हुने जस्ता समस्याहरु हुन्छन् ।
-बच्चाहरुलाई माटोपनाबाट जोगाउन समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।
-खानपिनमा नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि स्वस्थ खानपिनमा जोड गर्ने ।
-स्वस्थ जीवनशैलीको परिपालन गर्ने
-बाहिरी खाना अर्थात जकं फुड सेवन नगर्ने ।
-नियमित शारिरीक अभ्यास गर्न लगाउने ।
-मोकाइल, टेलिभिजन तथा कम्प्युटरको प्रयोग २४ घण्टमा २ घण्टामा सीमित राख्ने ।
-घरको दैनिक काममा पनि बच्चाहरुलाई सहभागी गराउने ।
-बेलुकीको खाना ७ बजेभित्र खुवाई १५ देखि २० मिनेट समय हिंड्डुल गर्न लगाउने ।
-बेलुकीको खाना र सुत्ने समयको अन्तर करिव २ घण्टाको निर्धारण गर्ने ।
Don't Miss it आफ्नै शरीरभित्र पनि छ डाक्टर ! ख्याल गर्नु भा छ ?
Up Next भगवान रामको मृत्यु यसरी भएको थियो, थाहापाउनुहोस्
ताजा हरियो तरकारीको माग मात्र होइन, मूल्य पनि बढी हुन्छ । जति महँगो परे पनि ताजा नै किन्ने र तत्काल पकाइहाल्ने…